France - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuhamba (Ikhasi 2)
Sikutshela okungabonakala edolobheni laseFrance iLa Rochelle, okuyindawo enedolobha elihle elidala kanye nechweba elihehayo.
Kwakukhona isikhathi emlandweni lapho iFrance yayigcwele izinqaba. Ngempela. Akubona bonke abasindile kule ndima ...
France ukudla okujwayelekile
Ukudla kwaseFrance kufana nekhwalithi nokucwengwa. Kubhekwa njengesinye sezibiliboco ezibaluleke kakhulu emhlabeni….
Sikunikeza uhlu lwamabhishi amahle kakhulu eCorsica, amabhishi amahle anesihlabathi anamanzi acwebezelayo atholakala kulesi siqhingi saseFrance.
Yini ongayibona eMont Saint Michel
Sikutshela konke okungabonakala eMont Saint Michel enhle esifundeni saseFrance eNormandy, ukuvakasha okubalulekile.
Yini ongayibona ePérigord Noir
Indawo yasePérigord Noir itholakala eFrance futhi isinikeza konke kusuka emihumeni yangaphambi komlando kuya emadolobhaneni amahle abukeka ephakathi.
Yini ongayibona eNarbonne
Sikutshela okungabonakala edolobheni laseFrance iNarbonne, ukuvakasha lapho ungabona khona kusuka emanxiweni amaRoma kuya ezakhiweni zomlando.
Yini ongayibona kuFrance Brittany
Sikukhombisa konke ongakubona eFrance Brittany, indawo yezivakashi egcwele amadolobhana amahle namadolobha amahle.
Yini ongayibona eStrasbourg
Sikutshela yonke into okufanele ibonwe edolobheni elihle laseFrance iStrasbourg, enesonto layo elidala, izikwele kanye nePetite France.
IMontparnasse tower, imibono evela endaweni yokubuka ephezulu eParis
Akuyona imfihlo ukuthi iParis ingelinye lamadolobha amahle kakhulu eYurophu, womabili ezingeni lomhlabathi ...
Imvelo isinikeza izimangaliso eziningi, kepha iqiniso ukuthi umuntu naye uzenzela okwakhe nokunye ...
Uma ungomunye walabo asebevele bacabanga ngehlobo elizayo ngoba awububekezeleli ubusika, lapho-ke unga ...
Umzila odlula amadolobhana ezwe laseFrance Basque
Izwe laseFrance iBasque liyisikhala ogwini lwe-Atlantic elixuba isiko nobuciko. Kulokhu ujoyina ...
Vakashela iChâteaux yaseLoire
Uma uzoba seParis izinsuku ezimbalwa, ungahlala ubhalisela ukuvakashela izinqaba zaseLoire. Ngeke wazazi zonke, ziningi impela, iYurophu igcwele izinqaba, kepha akukho okufana nezinqaba ezinhle nezinhle zaseLoire, eFrance. Ngabe ubhalisela ukuhlangabezana nabo?
Yini ongayibona esigodini saseLoire
Sikukhombisa amadolobha amakhulu eLoire Valley, kanye nezinqaba zayo ezinhle kakhulu futhi ezibalulekile ngaphakathi komzila wenqaba.
Imizana yangeNkathi Ephakathi yaseFrance yamiswa ngesikhathi
Imizana emangalisa kakhulu yasendulo itholakala eFrance. Izikhala ezibonakala zimile ngesikhathi, kunomlando omningi ongazithola.
Ezinye izinqaba ezinhle nezincane ezaziwayo zaseLoire
Ezinye zezinqaba ezingaziwa kangako eSigodini saseLoire kodwa zizinhle njengezinqaba eziheha kakhulu
IDune yePilat eFrance
IPilat Dune iyindawo yemvelo yobuhle obukhulu, phakathi kwehlathi ne-Atlantic Ocean.
UMnyuziyamu weGrand Lodge yaseFrance, eParis
EParis kunomnyuziyamu ongandile, yiMnyuziyamu yaseGrand Lodge yaseFrance
Amabhishi ama-5 aphezulu aseFrance
Uhlu, phezulu 5, lwamabhishi amahle kakhulu eFrance
Unogolantethe, uphawu lwe-Alsace
unogolantethe, uphawu luka-Alsace, inyoni ethandwa kakhulu nehlonishwayo kule mpambana mgwaqo yaseYurophu.
Izindawo zabavakashi eNormandy
INormandy yisifunda saseFrance esinezindawo eziningi eziheha izivakashi
Izithombe ezimbili zeLiberty yaseParis
EParis kunezichazamazwi ezimbili zeSitatimende Sokukhululeka
ILa Paloma, ibhishi elihle eFrance
Ibhishi laseLa Palomar ibhishi laseFrance eliseduzane naseNice
I-Calanque d'En-Vau, amanzi aluhlaza eningizimu yeFrance
Abaningi bathi liyikona elihle kunawo wonke futhi elibabazekayo eMedithera yaseFrance. Igama layo, elaziwa kuyo yonke iMidi, yiCalanque d 'En-Vau, idokodo elincane futhi elingafinyeleleki elinamanzi aluhlaza phakathi kwamadolobha aseMarseille naseCassis.
I-Basilica ehlaba umxhwele kaSanta Pius X eLourdes
Nansi indawo okufanele uyithole, ngisho nakubahambi abangakholwa. Kufihlwe ngaphansi kweBoulevard Père Rémi Sempé edolobheni lasePyrenean laseLourdes eFrance, yiBasilica ehlaba umxhwele yaseSaint Pius X, eyaziwa nangokuthi isisekelo esingaphansi komhlaba.
I-Thoiry, ingadi ye-safari zoological ekhangayo ngaseParis
IParc Animalier de Thoiry ingadi ebalulekile yezilwane emaphethelweni eParis.
Inqaba yaseSully-sur-Loire, inqaba engaqondakali yangezikhathi eziphakathi nogu lweLoire
ICastle of Sully-sur-Loire (iCâteau de Sully-sur-Loire) iyinqaba yakudala yasendulo eyakhiwa ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX.
La Tête au Carré eNice
Inkulumo ethi "yinhloko eyisikwele" yahunyushwa ngokoqobo ngumculi uSascha Sosno owayisebenzisa ukuklama nokwakha esinye sezakhiwo eziyinqaba nezasekuqaleni emhlabeni: ICentral Library yaseNice, eyaziwa kangcono ngegama leTête au Carré , ikhanda lesikwele.
Imigede Yangaphambi Komlando eFrance
Namuhla sizovakashela eminye yemigede edume kakhulu yomlando eFrance. Ake siqale ukuvakasha emigedeni yaseLascaux, a ...
IMontalivet, umphathi wamabhishi anqunu eYurophu
I-mecca yama-naturists kanye nama-nudist avela kulo lonke elaseYurophu itholakala eMontalivet, ogwini lwe-Atlantic ogwini lwaseFrance i-Aquitaine. I-Naturism yazalelwa lapha eminyakeni engaphezu kwengu-100 edlule. Leyo kilabhu encane yangasese eyasungulwa ehlobo lika-1905 ikhule ngokuhamba kwesikhathi futhi namuhla ingelinye lamahhotela amakhulu kunawo wonke emhlabeni.
Izakhiwo ezimbili zesimanje okufanele zibonwe eFrance
Namuhla sikhuluma ngezakhiwo ezimbili ezinhle eFrance okuyiSainte-Marie de La Tourette neGare de Saint-Exupery.
U-Trinighellu, isitimela esidabula eCorsica
I-UTrinighellu isitimela esincane esidumile esiwela iCorsica sisuka enyakatho siye eningizimu, uhambo oluthatha cishe amahora amane phakathi kwamadolobha ase-Ajaccio naseBastia ngamathafa amahle. Kunconywe ikakhulukazi abathandi bokuhamba ngesitimela, kepha nalabo abafuna ukuzwa okuhlukile, uhambo lokungcebeleka nezindawo ezinhle.
Paris ezikhumbuzweni eziyi-6
Umzila wabavakashi odlula eParis uvakashela izikhumbuzo eziyisithupha ezidumile zedolobha laseSeine
Iphiramidi Eliphikisiwe leLouvre
IPhiramidi Eliphikisiwe leLouvre, ekubambeni eParis
Amabhuloho amathathu athandana kakhulu ngeSeine
Akekho oke wavakashela eParis ongangabaza ukuthi inhlokodolobha yaseFrance ingelinye lamadolobha athandana kakhulu emhlabeni. Futhi ingxenye yaleyontelezi ilele ebuhleni nasekuphakameni kwamabhuloho agudla iSeine. Kunamabhuloho angaba ngu-50 eceleni komfula esifundeni sase-Île-de-France, kepha uma kufanele ukhethe amathathu athandana kakhulu, ukukhetha kucacile.
I-Etretat (eFrance): thola izindawo ezihehayo zaseNormandy
I-Etretat ingenye yezindawo eziheha izivakashi eNormandy (eNyakatho yeFrance).
IFransi: ITrois Corniches, imigwaqo ye-panoramic ye-French Riviera
Ama-Three Cornices (Les Trois Corniches) athathwa njengomunye wemigwaqo yasogwini ehlaba umxhwele emhlabeni.
I-Alsace, isifunda saseFrance esazi kakhulu ngamasiko kaKhisimusi
Isifunda esingasemngceleni wase-Alsace sibe nomthelela omkhulu ekutheni uKhisimusi ugujwa kanjani eFrance.
Idolobha laseNantes likhaya lezakhiwo zangesikhathi esidlule ezifana neCathedral of Saint Peter ne-Saint Paul, itshe lesikhumbuzo lesitayela samaGothic eliqukethe nethuna likaFrancis II.
Uhambo oludlula eProvence: Umzila we-lavender
IProvence ngezikhathi zakudala yayisinye sezifundazwe ezazithandwa yiRoma. Igcwele izinsalela ezifakazela ...
I-Arras, ukuvakasha komlando enyakatho yeFrance
Siya enyakatho yeFrance ukuvakashela nokwazi idolobha lase-Arras, elimakwe yizikhumbuzo zalo nezindawo ezivela eMpini Yezwe Yesibili.
Amabhishi amahle kakhulu aseFrance
Ihlobo liza futhi sekuyisikhathi sokuyofuna ibhishi lapho ungahlala khona izinsuku ezimbalwa ngaphansi kwemisebe ka-Febo….
I-Cannes (EFRANSI): Izindawo ezihamba phambili e-French Riviera
I-Cannes ifana ne-cinema, osaziwayo nokunethezeka. Izikhathi eziningi ibizwe - ngobulungiswa - inhlokodolobha yaseFrance ye-cinema, ...
Okuhle (EFRANSI): Izindawo ezihamba phambili eCôte d'Azur
Ibizwe njengenhlokodolobha yeCôte d'Azur ngenxa yethonya layo elikhulu lomlando namasiko esifundeni, iNice ...
Izikhumbuzo zomlando ezibaluleke kakhulu eParis
Ngabe unesibindi sokuhamba izindawo ezinkulu zaseFrance? Leli zwe leGallic ligcwele ukuheha okungenakubalwa futhi ngenxa yalesi sizathu ...